သံပုံးတီးတဲ့ သူရဲကောင်းပြည်သူ ပြည်သားတွေအတွက် အားတက်စရာ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ကို ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန် – Cele Oscar
ဂီတလောကမှာ အောင်မြင် နေတဲ့ အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်း ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးမူ ကို တစ်ခဲနက် ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူမဟာ ဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုတွေကလည်း တခြားသူတွေ နဲ့ မတူတဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင် တွေကိုပဲအမြဲ ဝတ်ဆင် တတ်တဲ့ သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ဖြူဖြူကျော်သိန်း က အနုပညာအလုပ် တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နေပြီး အကောင်းဆုံး လျှောက်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလောမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ မှာလည်း အမှန်တရားကို လိုလားကြတဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားတွေနဲ့ အတူ တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပေးခဲ့တာကို တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း က သံဗုံးတီးတဲ့ သူရဲကောင်း ပြည်သူပြည်သား တွေအတွက် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် သတင်းကောင်းကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “ဖြူဖြူတို့မြန်မာပြည်သူသံပုံးတီး သူရဲကောင်းတွေ အတွက်အားတက်စရာ သတင်းကောင်းလေး တစ်ခုပါ…….
လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) ပတ်ကျော်လောက်ကတည်းက အရှေ့တီမောနိုင်ငံ သမ္မတဟောင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင် Mr. Jose Ramos-Horta ကစတင်ပေးခဲ့တဲ့ potsandpansforMyanmar ကန်ပိန်းကို ခုဆိုရင် ASEAN နဲ့ International ကအထင်က ရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကပါ ပါဝင်အားဖြည့်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပေးနေပါပြီ ​Facebook နဲ့ Twitter ကသူတို့သံပုံးတီး နေတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ link လေးတွေကိုကျေးဇူးတင်စွာ နဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….ဖြူဖြူတို့တွေ potsandpansforMyanmar လို့ search လုပ်ပြီးမိတ်ဆွေတွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းသွားပြောကြရအောင်လား” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ..ပရိသတ်ကြီးရေ သံပုံးတီးတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ အတွက် ဖြူဖြူ ရဲ့ သတင်းကောင်းလေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သတင်းအရင်းမြစ်: Source – Phyu Phyu Kyaw Thein fb page
ဂီတလောကမှာ အောငျမွငျ နတေဲ့ အဆိုတျောဖွူဖွူကြျောသိနျး ကတော့ ပရိသတျတှေ ရဲ့ အားပေးမူ ကို တဈခဲနကျ ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူမဟာ ဝတျစားဆငျယဉျမှုတှကေလညျး တခွားသူတှေ နဲ့ မတူတဲ့ အမိုကျစားဖကျရှငျ တှကေိုပဲအမွဲ ဝတျဆငျ တတျတဲ့ သူပဲဖွဈပါတယျ။ လကျရှိအခြိနျထိ ဖွူဖွူကြျောသိနျး က အနုပညာအလုပျ တှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျ နပွေီး အကောငျးဆုံး လြှောကျလှမျးနတော ဖွဈပါတယျ။
လတျတလောမှာဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထုလှုပျရှားမှုတှေ မှာလညျး အမှနျတရားကို လိုလားကွတဲ့ ပွညျသူ ပွညျသားတှနေဲ့ အတူ တဈသားတညျး ရပျတညျပေးခဲ့တာကို တှမွေ့ငျရပါတယျ။ ယခုမှာတော့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး က သံဗုံးတီးတဲ့ သူရဲကောငျး ပွညျသူပွညျသား တှအေတှကျ စိတျခှနျအားဖွဈစမေယျ့ သတငျးကောငျးကို ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ “ဖွူဖွူတို့မွနျမာပွညျသူသံပုံးတီး သူရဲကောငျးတှေ အတှကျအားတကျစရာ သတငျးကောငျးလေး တဈခုပါ…….
လှနျခဲ့တဲ့ (၃) ပတျကြျောလောကျကတညျးက အရှတေီ့မောနိုငျငံ သမ်မတဟောငျး ငွိမျးခမျြးရေး နိုဗယျဆုရှငျ Mr. Jose Ramos-Horta ကစတငျပေးခဲ့တဲ့ potsandpansforMyanmar ကနျပိနျးကို ခုဆိုရငျ ASEAN နဲ့ International ကအထငျက ရပုဂ်ဂိုလျနဲ့ အဖှဲ့အစညျးတှကေပါ ပါဝငျအားဖွညျ့ပွီးမွနျမာပွညျသူတှနေဲ့အတူရပျတညျပေးနပေါပွီ ​Facebook နဲ့ Twitter ကသူတို့သံပုံးတီး နတေဲ့ ဓာတျပုံနဲ့ link လေးတှကေိုကြေးဇူးတငျစှာ နဲ့ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ….ဖွူဖွူတို့တှေ potsandpansforMyanmar လို့ search လုပျပွီးမိတျဆှတှေကေို ကြေးဇူးတငျကွောငျးသှားပွောကွရအောငျလား” ဆိုပွီး ရေးသားထားပါသေးတယျ။ ကဲ..ပရိသတျကွီးရေ သံပုံးတီးတဲ့ ပွညျသူပွညျသားတှေ အတှကျ ဖွူဖွူ ရဲ့ သတငျးကောငျးလေးကို ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
သတငျးအရငျးမွဈ: Source – Phyu Phyu Kyaw Thein fb page